काठमाडाैं । डा. गोविन्द केसीले अस्पताललाई युद्धभूमि बनाएर आफूलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याएको बताएका छन् । उनले आफ्नो इच्छाविपरीत अपहरण शैलीमा ल्याइएको बताउँदै अाफ्ना माग पू्रा नभएसम्म अनशन नताेड्ने अडान जारी राखेका छन् । “वर्तमान सरकारले अमानवीयरुपमा क्रुरतापूर्वक सत्याग्रहरीको इच्छा विपरीत अस्पताललाई युद्धभूमि जस्तो बनाई अपहरण शैलीमा बल प्रयोग गरी जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको छ,” डा. […]
महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका–१, ढेकहा गाउँमा गएराित एक महिलाको हत्या भएको छ । पिपरा गाउँपालिका–१, ढेकहा गाउँ बस्ने श्याम महतोकी ३० वर्षीया पत्नी रीता देवी महतो रहेकी छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार जीउभरि निलडाम र चोटपटक लागेको अवस्थामा हिजो साँझ रीता देवीको शव उनको आफ्नै कोठामा […]
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रा. डा. गोविन्द केसीको मागसहितका विषयमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विहीबार नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र राजपाका नेताहरुसँग छलफल गरेको कांग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाण्ले बताए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकी आसय नै तोडमोड गरेको र अध्यादेशका बुँदा हुबहु अघि […]
काठमाडौ । पदयात्री यर्पटकलाई बिरामी बनाएर फेक रेस्क्यु गर्दै प्रतिपर्यटक ५० हजार डलरसम्म बिमा कम्पनी हुँदै पुनर्बिमा कम्पनीबाट असुल गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । लामो समयदेखि ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड, रेस्क्यु कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालको मिलेमतोमा फेक रेस्क्युको ठूलो धन्दा मार्फत नेपाल आउने पर्यटकलाई प्रयोग गरेर रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो । जसबाट आउने […]
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गर्ने निर्णय जारी राखेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक संसद सचिवालयले सूचना टांसेर साउन ११ गते सम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको हो । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बीमा विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव […]
काठमाडौं । उपचारका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पुगेका बिरामीका आफन्त र चिकित्सकबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । उपचारका लागि पुगेका सर्वसाधारण, आन्दोलनरत चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनबीच उपचारका बिषयमा तनाव उत्पन्न भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । सर्वसाधारणले उपचार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने चिकित्सकहरुले आन्दोलन भएको बताएपछि विवाद देखिएको हो । चिकित्सकले आफुहरु […]
सियान विश्वविद्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता
काठमाडौं । चीनको सान्सी प्रान्तमा अवस्थित सियान विश्वविद्यालयले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष २० वटा छात्रवृत्ति दिने भएको छ । हालैमात्र बुटवल उपमहानगरपालिका र सान्सी प्रान्तमा अवस्थित सियान महानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सोही अवसरमा उक्त सियान महानगरपालिकामा रहेको सियान विश्वविद्यालयले सो छात्रवृत्तिको घोषणा गरेको हो । चीनको सान्सी प्रान्तद्वारा केही […]